Inona no tokony ho fantatro momba ny backlinks SEO ambony mba hananganana tranoko?
Fantatrao ve hoe nahoana ny backlinks no tena manan-danja ao amin'ny SEO? Ny olana dia hoe maro loatra ny olona mahafantatra ny lohahevitry ny rohy amin'ny tranokalan'ny tranokalam-baovao no mino fa izy ireo dia mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitry Google farany amin'ny fandefasana ny laharam-pivoaran'ny fikarohana - ho an'ny tranonkala, bilaogy, sns.Mazava ho azy, fa misy heviny toy izany. Raha ny marina, ny fandinihana vao haingana dia nanamarina fa ny rohy rehetra momba ny rohy ao amin'ny tranonkala (raha tsy izany dia ny toplinks SEO ambony) dia anisan'ireo zavatra telo tena lehibe indrindra eritreretin'ny algorithm.
Mazava ho azy, ny maha-zava-dehibe ny lamosina avo lenta dia fantatry ny olona rehetra mandray anjara amin'ny indostrian'ny fikarohana. Fa ankehitriny dia lasa mahery kokoa noho ny hatramin'izay ny hery fiarovana farany azy ireo - izany no antony tokony hahafantaranao ny rehetra momba ny foto-kevitra momba ny SEO ambony, ny SEO, ny fihenam-bidy sy ny sira. Hanome anao ny sary feno ny Search Engine Optimization sy ny rohin'ny tranonkala, dia hanomboka amin'ny teny grika fototra aho.
Inona no mahatonga ny foto-kevitra momba ny backlinks SEO ambony?
Voalohany indrindra, ny teny hoe "backlink" dia midika ho rohy mankany amin'ny tranokala hafa, bilaogy, na angamba loharanom-baovao hafa rehetra hita ato amin'ny Internet. Avy eo, ny teny hoe "ambony" dia manoritsoritra singa mahery na fahombiazan'ny backlinks - amin'ny fomba fijerin'ny SEO. Raha ny marina, ny teny hoe "SEO" dia midika fa ny lozam-pifaneraserana amin'ny tranonkala dia mitarika ny lozam-pifaneraserana amin'ny fikarohana - na amin'ny tsara na ratsy, na ratsy, ary indraindray aza amin'ny fomba tsy mitongilana. Raha ny marina, ny fahombiazan'ny backlinks amin'ny SEO dia miankina amin'ny isan'ireo fotokevitra fototra sy ireo hevi-dehibe resahina etsy ambany.
Eritrereto ny tontolo hita ao amin'ny Internet ho rafitra iraisam-pirenena ahitana vondron'olona maro mifandraika sy tranonkala. Ary ny zava-drehetra dia mihetsika ao - ny votoatin'ny tranonkala dia manohy mivoatra mba ho hitan'ny maro ny mpampiasa maro - dia mihabetsaka ny olona mampiasa izany, mampiasa, mizara ary mifandray aminy. Amin'izany fomba izany, ny tranonkala rehetra, ary ny bilaogy rehetra dia miseho amin'ny dingana iray misy eo amin'ny famoronana sy fizaràm-pahefana kokoa PageRank, sy ny fahefana.
Ny fitadiavam-bola SEO ao amin'ny tranonkalanao dia manondro ny tanjony amin'ny ankapobeny - izay mamorona tombam-bidin'ny pejy sy ny fahefam-panjakana, miaraka amin'ny hery tafiditra ao amin'ny TOPO Top Backs. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny SEO, ny fahafahanao mijery ny tranokalan'ny Google amin'ny SERPs. Dia izay.
Sotro ny saka (a. K. ny. pifanarahana amin'ny rohy) dia hita amin'ny alalan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fanamafisana ho toy ny "ampahany" an'ny SEO marina. Raha ny amiko, dia fantatro ny hevitr'ilay jiosy mifandraika amin'ny hoe ny "vola" an'ny SEO dia manitatra raha toa ka mifamatotra ireo pejy roa miisa roa samihafa. Noho izany, ny fako fifandraisana dia fitondran'ny SEO fitakiana - nafindra avy amin'ny tranonkala mpamaky ary nizotra ho any amin'ny toerana voatokana.
Ankoatra izany, eto ambany ny tsipika ambany ho an'ny hevitra momba ny backlinks SEO ambony. Raha ny marina, ny teny fototra fototra rehetra voalaza aloha (i. f. , Ny fitadiavam-bola SEO, ny fitovian'ny rohy ary ny fifandraisana an-jaridaina) dia nohamarinin'ny vondrom-piarahamonina SEO - mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny Google. Raha ny marina dia izy ireo no fiteny amin'ny fanavaozana maoderina, fa tsy ny motera google. Amin'ny teny tsotra, na Google mihitsy aza, sy ny Akademia Webmaster dia tsy nanome ny heviny marina mihitsy momba io olana tena mahavariana io. Noho izany, manantena aho fa ny fampidirana fohy momba ny topo-peo SEO dia hanampy anao, farafaharatsiny mba hananana fanombohana mazava ho anao ny lalao manaraka ao amin'ny tontolon'ny Search Engine Optimization Source .